China Flange Mugadziri uye Mutengesi | Kingmetal
A Flange inzira yekubatanidza mapaipi, mavhavha, mapombi uye zvimwe zvinoshandiswa kugadzira pombi. Inopawo nyore kupinda kwekuchenesa, kuongorora kana kugadzirisa. Flanges anowanzo sunganidzwa kana kumisikidzwa musystem dzakadai obva abatanidzwa nemabhaudhi.
Flanges - Ruzivo Ruzhinji
Iyi flange yakatenderedzwa yakatenderedzwa mukati mehurongwa pamutsipa wayo zvinoreva kuti huchokwadi hwenzvimbo yakasungwa nzvimbo inogona kuongororwa zviri nyore neradiography. Iwo mabhure eese ari maviri pombi uye flange mechi, iyo inoderedza kusagadzikana uye kukanganiswa mukati meiyo pombi. Iyo weld mutsipa saka inofarirwa mune zvakakomba kunyorera
Iyi flange inotsvedza pamusoro pepombi uye ipapo fillet welded.Slip-on flanges zviri nyore kushandisa mukugadzirwa kwekushandisa.
Iyi flange inoshandiswa kuvhara mapaipi, mavhavha nemapombi, inogona zvakare kushandiswa seyakavhara chivharo. Iyo dzimwe nguva inonzi inonzi blanking flange.
Iyi flange inopesana nekutora kubvuma iyo pombi isati yaiswa fillet welded. Iyo yakazvara yeiyo pipeand flange zviri zviviri zvakafanana zvakafanana zvinopa kunaka mafashama maitiro.
Iyi flange inonzi inonzi yakasungwa kana kumisikidzwa. Iyo inoshandiswa kubatanidza zvimwe zvakapetwa zvinhu mune yakaderera kumanikidza, isiri-yakakosha kunyorera. Hapana kutenderera kunodiwa.
Aya ma flange anogara achishandiswa pamwe neyakagumisira magumo ayo ari magaro akasungirirwa kune pombi ine flange yakasununguka kuseri kwayo. Izvi zvinoreva kuti stub magumo inogara ichiita kumeso. Jojoji yemakumbo inofarirwa mune yakaderera kumanikidza kunyorera nekuti inonamatira nyore uye inowirirana. Kuderedza mutengo aya ma flanges anogona kupihwa pasina hubhu uye / kana kurapwa, yakavharwa kabhoni simbi.
Mhete Rudzi Joint
Iyi inzira yekusimbisa kuburitsa humbowo flange kubatanidza pakumanikidza kukuru. Mhete yesimbi yakamanikidzwa kuita hexagonal groove pachiso cheiyo flange kuita chisimbiso. Iyi nzira yekubatanidza inogona kushandiswa paWeld Neck, Slip-on uye Blind Flanges.
Flange WeldingNeck, Slipon, Bofu, Plate, ThreadedFlange, SocketWeldFlange
B16.47, akateedzanaB (API605)
Mashoko ANSI CSA105 / A105NA350LF2ss304 / 304L, 316 / 316L
Dzvinyiriro ANSI Kirasi150,300,400,600,900,1500,2500lbs
Saizi ANSI 1/2 * -120 "
Bemhapemha anti-rustoil, varnish, yellowpaint, blackpaint, galvanizingetc
chiutsi, mhepo, gasi
Pasuru Plywoodcases / pallets
Pashure: Yakakwira mhando Carbon Simbi Weld Caps
Zvadaro: Kwakakurudzira Hot kwakakurudzira nyore kufurirwa Iron Pipe Fitting kugadzira beaded